Dhalinyaro rabta ku biirida Al-Shabaab oo gudaha u soo gashay Soomaaliya – Axadle
Wakit Tama coordination requires
African Union assembly on the method
5 instances of the Indian variant of Covid-19 have been detected at
Kenya waxay isku dayeysaa inay joojiso qorshaha Madaxweyne Farmaajo – Axadle
WAR DEG DEG AH: DF oo go’aan ka gaartay Ciida – Axadle
Sacuudi Carabiya waxay ku dhawaaqday Maalinta Ciidda – Axadle
Sawirro: Pharmajo Kusoo dhawow Uganda – Axadle
Dhalinyaro rabta ku biirida Al-Shabaab oo gudaha u soo gashay Soomaaliya
Saddex dhalinyaro ah kana soo jeeda ismaamulka Mandera ee waddanka Kenya ayaa ka soo gudbay xuduudka Soomaaliya iyaga oo ku biiray Al-Shabaab, sidda uu xaqiijiyay taliyaha booliska gobolka waqooyi bari ee Kenya maamusho.
Nick Ndalana oo arrintaan ka sheegay kulan looga hadlayey ammaanka ayaa xusay in dhalintaas ay kasoo jeedaan degaanada Fino iyo Lafey, isagoo shaqsiyaadka kale uga digay in ay ku dhaqaaqaan falkaas oo ah ku biiradi Xoogga hubaysan ee Al Shabaab.
Waalidiinta ayuu kula dardaarmay in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa caruurtooda. Si gaar ah, qoyska saddexdaas wiil oo uusan magacaabin ayuu ku booriyey in caruurtooda ay isku soo dhiibaan ciidanka amniga.
“Waalidiinta waxaan u sheegeynaa hadii ay kasoo laabtaan Soomaaliya iyagoo aan isa soo dhiibin waxaan ula dhaqmi doonaa sidda cadowgeena,” ayuu ka sheegay kulan looga hadlayay amaanka.
Hadalkaan ayuu taliyuhu ka sheegay ismaamulka cusub ee Arabia, halkaasoo 2014-kii qabsaday ciwaanada warbaahinta markii Al Shabaab ay ku dishay 28 rakaab ah kuwaas oo ay kala dageen gaadiidkii ay saarnaayeen.
Tan iyo 2014-kii, waxaa aagaan oo u dhaxeeya waddooyinka Mandera-Lafey-Elwak laga diiwaan-geliyey 116 falal argagixiso, sidda Boolisku sheegay kaasoo intaas ku daray in dadkaas badankooda ay ahaayeen shacab.
Al Shabaab ayaa gudaha Kenya ka gaystay weeraro dhiig badan ku daatay ka dib markii ciidanka Kenya sanadkii 2013 ku biireen howlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliy-AMISOM oo soomaaliya ka socda ku dhawaad 15 sano inkastoo aysan gaarin natiijo muuqata, marka loo eego awooda Al Shabaab u leedahay in ay weerarto xurumaha Dowladda, Xafiisyada Diblomaasiyiinta iyo AMISOM.
axadle 10278 posts
Dhaxalka Dagaalkii Iiraan iyo Ciraaq ayaa wali soo ifbaxaya 40 sano kadib!
Sacuudiga iyo Iran oo hadalo kulul isku dhaafsaday shirka UN-ka.
One of the best Mexican residents who play in MLS
Manchester United Oo Ka Caawisay Leicester Metropolis In Ay…
Twitter reacts when Man Metropolis wins the Premier League…
Prev	Next 1 of 3,028
CHAMPIONS: Manchester Metropolis Oo Ku Guuleysatay…
Participant rankings when Foxes wins
What Occurs to Your Physique When You…
Man Metropolis have been confirmed as…
Prev	Next 1 of 3,027